ब्लग - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
8 सक्छ, 20216सक्छ, 2021 सिल्भिया जेम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
8 सक्छ, 20216सक्छ, 2021 म्याकेन्जी जोन्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
6 सक्छ, 20215सक्छ, 2021 जेफ रोमेरो	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिश्रम गर्नुभयो, तर अब अन्तमा अन्त आएको छ; 55 सहि कुनामा अवस्थित छ र तपाई रिटायर हुनुहुन्छ। सायद तपाई र तपाईको जीवनसाथीले नयाँ साहसका लागि पुरानो परिवारको घरमा व्यापार गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ, तर कहाँ सुरु गर्ने थाहा छैन। नयाँ घर खोज्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर उत्तम समुदायमा नयाँ घर खोज्नु अझ गाह्रो छ। भाग्यवस, अर्को दशकमा अवकाशप्राप्तको आगमनसँगै, जताततै निर्माणकर्ताहरूले यस समस्यालाई समाधान गर्न थालेका छन् 55 XNUMX+ डिजाइनर समुदायहरूले अवकाशलाई ध्यानमा राखी विशेष गरी बनाएको।
6 सक्छ, 20214सक्छ, 2021 शाहिद इब्राहिम	टिप्पणी छोड्नुहोस्
5 सक्छ, 20214सक्छ, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो पछ्याउने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्न कठिन हुन सक्छ स्पीच प्याथोलजीमा स्नातकोत्तर, वा एक फरक क्षेत्र। सबै भन्दा पहिले, तपाईले जान्नु पर्छ कि त्यहाँ दुई एमए डिग्री छन्; थेसिस (अनुसन्धान आधारित) र गैर-थेसिस (कोर्सवर्क आधारित, पेशेवर, वा सिकाइएको)। एमए प्रोग्राम तपाईले छान्नु भए पनि, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो वित्त र समय प्रतिबद्ध गर्नु अघि जान्नु पर्छ। तपाईले मास्टर डिग्रीको लागि आवेदन दिनु अघि, त्यहाँ तीनवटा चीजहरू छन् जुन तपाईलाई पहिले नै थाहा पाउनुपर्दछ।
5 सक्छ, 20214सक्छ, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
4 सक्छ, 20214सक्छ, 2021 लिन्डा अर्बन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
हरेक वर्ष, स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू विश्वव्यापी खोप ह्यान्डलिंग र भण्डारणमा त्रुटिहरूको कारण पर्याप्त वित्तीय घाटा खर्च गर्दछ।
अनुचित खोप ह्यान्डलिंगबाट वित्तीय घाटा मात्र गिर्दैन; यदि स्वास्थ्योपचार सुविधाहरूले बिरामीको आत्मविश्वास गुमाउन सक्छ यदि सम्झौता खोपहरू गल्तीले प्रशासित गरियो भने।
स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूले खोप क्षमता कायम गर्न एक प्रभावी कोल्ड चेन कायम गर्नुपर्छ। एक प्रभावकारी खोप आपूर्ति श्रृंखला कायम गर्न, रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC) निम्न चरणहरूको सिफारिश गरिएको छ:
4 सक्छ, 20213सक्छ, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
4 सक्छ, 20213सक्छ, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
के तपाइँ यस गर्मीको मौसममा केहि रमाईलो र उत्साहजनक खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँ तपाईको स्थानीय क्षेत्र मा धेरै राम्रो साहसिक कार्यहरू छन्। अब तपाइँको लागि अद्वितीय र अद्भुत केहि योजना बनाउने समय हो। यहाँ ad साहसी नयाँ गतिविधिहरु छन् जुन तपाई र तपाईको परिवारले प्रयास गर्न सक्दछ जब गर्मी मौसम अन्तमा आउँछ।
3 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो घर र यात्राको क्रममा दुबै सत्य हो। जे भए पनि, सबैभन्दा नराम्रो घटनाबाट बच्नको लागि तपाईंले लिन सक्ने एउटा कदम भनेको घर र तपाईंको सवारी साधनमा पहुँचयोग्य पारिवारिक आपतकालीन किट सिर्जना गर्नु हो। तल पाँच वस्तुहरू छन् जुन तपाईंलाई यस किटमा चाहिन्छ।
देशको केहि भागहरूमा वन्यजन्तुले सबै उमेरका मानिसहरूलाई ठूलो खतरा दिन्छ। विषालु सर्पले बसोबास गर्ने देशका भागहरूमा यो बढी सत्य हो। यसमा र्याटलस्नेक्स, पानी मोकासिन, तांबेहेड्स, सूतीमाउथ, र कोरल सर्प जस्ता धेरै फरक प्रजातिहरू समावेश छन्।
3 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 जुन स्टेप्सन्स्की	टिप्पणी छोड्नुहोस्
मैले भर्खरै विक्टर फ्रेंकल १ 1905 ०1997-१-XNUMX-XNUMX को बारेमा अष्ट्रियन मनोचिकित्सक र सर्वश्रेष्ठ बिक्रेता लेखकको बारेमा लेख पढें।अर्थको लागि मानिसको खोजी" उनी Auschwitz जीवित व्यक्ति थिए जसले १ 1946 .XNUMX मा युद्ध पछि यो पुस्तक लेखेका थिए जसले हाम्रो जीवनको अर्थ पत्ता लगाउने महत्वपूर्ण विषयको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दछन्। उसले यसको अर्थ अज्ञात रूपमा लेख्नु भनेको थियो तर अन्तिम क्षणमा उसले यसको नाम राख्ने निर्णय गर्यो र यो वर्षको सर्वश्रेष्ठ विक्रेता भयो र पछि धेरै वर्षहरू।
3 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईंले इलेक्ट्रिक कारलाई बोलाउनुहुने फिल्महरूका वास्तविकता छिट्टै विश्वव्यापी रूपमा वास्तविकतामा परिणत हुँदैछ। गाडीमा सुविधाहरू हुन सक्छन् तपाईंको मोबाइल फोन प्रयोग गर्दा जब तपाईं आफ्नो स्वायत्त वाहनको माग गर्नुहुन्छ। स्वतन्त्र ड्राइभरको भविष्य भ्वाइस कमाण्डबाट ईमेल र कलहरू फिर्ता हुनेछ। कारहरू पनि छोडिनेछ र ट्राफिकको चिन्ता नगरिकन जस्ता सुविधाहरूको साथ आउँदछ।
3 सक्छ, 2021 अप्रिल 28, 2021 सुप्रिया घुजे	टिप्पणी छोड्नुहोस्
स्वास्थ्य सेवामा चीजहरूको इन्टरनेट (IoT) स्वचालित औषधीको नयाँ पुस्ताको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। स्वास्थ्य प्यारामिटरहरू र महत्त्वपूर्ण संकेतहरू पहिरिन योग्य, इम्बेडेड, र पचाउन सकिने उपकरणहरू द्वारा मापन गरिन्छ जहाँ बिरामीहरू वा उनीहरूको हेरचाहकर्ताहरूले उनीहरूलाई आवश्यक छ। यी सेन्सरहरूले बिरामीको घरमा स्वास्थ्य सेवा ल्याएर टेलिमेडिसिन र रोकथाम उपचारको अनुमति दिन्छ।
3 सक्छ, 2021 अप्रिल 28, 2021 ओलिभिया ओलिभर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
डबल-एन्डि shower स्नान स्नान ब्रिटेनको सबै भन्दा धेरै खोजी गरिएको डिजाइन मध्ये एक हो। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि स्नानहरू आधुनिक बाथरूमको अत्यावश्यक अंश भइरहेका छन्। र केहि स्थानहरूमा जहाँ घरमालिकहरूले नुहाउनका लागि उनीहरूको वर्षालाई समेत बदल्दैछन्। यद्यपि, त्यहाँ नुहाउने नुहाउनुको सट्टा यसको विकल्पको सट्टा विकल्प हुनसक्दछ। किन नुहाउने लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ कि अधिक र अधिक मानिसहरूले अब बुझे कि नुहाउने ठाउँको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यको लागि कती राम्रो हुन सक्छ। यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि नुहाउनुपर्दा कडा दिन पछि आराम पाउन सकिन्छ। त्यसो भए यो तपाईंको दिनको अन्त्य गर्ने उत्तम तरिका हुन सक्छ। यदि तपाईं जिम कसरतमा हुनुहुन्छ भने, यो व्यायाम पछि नुहाउनु तपाईंको स्वास्थ्य प्रणालीको एक हिस्सा हुन सक्छ।
T सुझावहरू द्रुत रूपमा योग्य ईन्जुरी अटर्नीलाई काममा लिनुहोस्
2 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो सुनिश्चित गर्न कि तपाईले सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नुभयो जुन तपाई दुर्घटना पछि योग्य हुनुहुन्छ, एउटा वकीललाई काममा लिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। धेरै अवस्थाहरूमा, दुर्घटना पछी तपाईंको पक्षबाट जतिसक्दो चाँडो वकील हुनु आवश्यक छ। भाग्यवस, त्यहाँ पाँच सुझावहरू छन् जुन तपाईले अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ योग्य चोटपटक वकील चाँडो भाँडामा लिन।
मनोविज्ञान मा क्यारियर कसरी शुरू गर्ने
2 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 म्याकेन्जी जोन्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सबैजना तपाईलाई फर्कन्छ जब उनीहरूसँग समस्या छ। उनीहरूले तपाईंलाई भन्छन् कि तपाईंसँग राम्रो सुन्ने कान, एक हात समात्ने, र काँधमा झुकाव छ। तपाईं अरूको लागि गहिरो महसुस गर्नुहुन्छ। जीवनमा तपाईंको आफ्नै अनुभवहरूले तपाईंलाई समान अवस्थाहरूमा अन्यहरूसँग जडान निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं आफू वरिपरि भएकाहरूको लागि गहिरो महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईंलाई व्यक्तिलाई मद्दत गर्न आवश्यक छ। तपाईलाई लाग्छ तपाई मनोवैज्ञानिक हुन चाहानुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ तपाई कुन दिशामा जीवनमा जान चाहानुहुन्छ। अब तपाइँ मनोविज्ञान मा क्यारियर शुरू कसरी जान्नु पर्छ।
जब तपाइँको व्यवसायको लागि कानूनी सहायकलाई काममा लिन्छ
2 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 भिक्टोरिया स्मिथ	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईंको कानूनी अभ्यासको आकार वा कानूनको प्रकार जस्तोसुकै व्यवहार गर्दा, दक्षता सुधार गर्दा लागत कम गर्दा प्राथमिकता हो। यो एक मात्र तरीका हो कि तपाइँ प्रतिस्पर्धी किनारा कायम गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, यो लागत कम गर्न मा यति ध्यान केन्द्रित गर्न प्रतिकूल छ कि तपाईं कानूनी सहायकहरु भाँडा छैन जब एक आफ्नो अभ्यास को दक्षता सुधार गर्न को लागी एक लाभकारी हुन सक्छ।
Church तरीकाहरू तपाईको चर्चले यसको वित्तीय लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ
1 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
चर्च दर्शन तर्फ बजेट
वार्षिक खर्च रणनीति चर्चको फस्टाउनको लागि यसले के लिन्छ भनेर दर्साउने राम्रा परिभाषित कागजातबाहेक अरू केही छैन - तर बढ्दै गरेको सरलताले तपाईंलाई मूर्ख बनाउन नपाओस्। एक वैकल्पिक रूपमा, आउने बर्षहरूमा बजेट गर्ने उद्देश्य स्थापित गर्नुहोस्।
बजेटिंगले तपाईंको चर्चको लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट गर्न, यसको गतिविधिहरूको लागि रणनीति बनाउन, र चर्चको दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सही स्रोतहरू प्रदान गर्न नेताहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ। राम्रोसँग विस्तृत बजेटले तपाईंलाई चर्च खर्चहरू नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
Simple सरल तरिका तपाईंको कम्पनीको संस्कृति सुधार गर्न
1 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 सियरा पावेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
धेरै नेताहरूले आफैलाई सोध्छन् कि यो संगठनको संस्कृति सुधार गर्न के लिन्छ। सत्य यो हो कि यो केवल एउटा चीज मात्र छैन जुन सुधार गर्न आवश्यक छ तपाईका कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यस्थललाई कसरी हेर्छन् भनेर परिवर्तन गर्न। कम्पनी संस्कृति प्रायः संस्थाको दिमाग र दिमागको सामूहिक हुन्छ।
बिभिन्न चीजहरूले एक विशेष कम्पनीमा कार्यरत संस्कृतिहरूलाई असर गर्छ र काममा कर्मचारीको मनोवृत्तिलाई असर गर्ने कम्पनीमा अर्को कम्पनीमा भिन्न हुन्छ। जब संस्कृति मूल्या companies्कन कम्पनीहरूमा गरिन्छ, यो याद गर्नु आवश्यक छ कि प्रक्रियाहरू, संयन्त्रहरू, र क्रियाकलापहरू कर्मचारीहरू संलग्न छन् उनीहरू कसरी महसुस गर्छन् भन्नेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
अप्रिल 30, 20212सक्छ, 2021 लिजी होवार्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
कहिलेकाँही तपाई आफैं क्यारियर परिवर्तनको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ। क्यारियरमा परिवर्तन भनेको रोजगारीमा परिवर्तन भन्दा बढी मात्र हो किनभने तपाई पूर्ण रूपमा बिभिन्न प्रकारको काममा जान सक्नुहुन्छ, यसको परिणाम स्वरूप त्यहाँ केहि क्यारियर परिवर्तनको बारेमा सोच्दा तपाईले विचार गर्नुपर्ने कुराहरु.
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं भुक्तान बीचमा बाँच्न सक्नुहुन्छ
क्यारियर परिवर्तन विचार गर्दा तपाईं गर्न सक्ने सबैभन्दा खराब गल्ती नयाँ क्यारियरले उत्पादन गर्ने तलब भित्र बाँच्न सक्षम भइरहेको छैन। उदाहरण को लागी, यदि तपाई संग एक हजार डलर को लागी debtण भुक्तान को हरेक महीना को मूल्य छ, तपाई लाई नौ महीना डलर मा एक महीना को तलब मा जीउन को लागी सक्षम हुनु छैन। अब, कहिलेकाँही तपाईसँग विकल्प नहुन सक्छ, तर त्यो फरक अवस्था हो।
Jobs रोजगारहरू यदि तपाई हेल्थकेयरमा काम गर्न चाहानुहुन्छ भने विचार गर्नुपर्ने
अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 28, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
स्वास्थ्य सेवा हालसालै विस्तार गर्ने क्यारियर क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जुन तपाईले हालसालै प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी हालको महामारीको कारणले विश्व बाहिर आउन थालेको छ। त्यहाँ करियरहरू लगभग कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य सेवामा उपलब्ध छन् जुन तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, oncology मा काम गर्नेदेखि लिएर शल्य चिकित्सा हेरचाहमा काम गर्ने सम्म।
कसरी सफल प्यारेन्टिंग कोच बन्ने
अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 29, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यदि अभिभावकले मूल्यवान मोडलहरू ब्यवस्थापन गरे र सजायको सहारा बिना नै राम्रो संचार र सहयोगको लागि प्रेरित गरे, तिनीहरू सफल हुनेछन्। खुशी बच्चाहरु समाज को आवश्यकता छ। तसर्थ, यो प्यारेन्टिंग कोचहरू हुनु आवश्यक छ जसले प्यारेन्टिंगलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दछन् र आमा बुबा र उनीहरूका बच्चाहरू बीच राम्रो सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न सक्दछन्।
12... 62 पुराना पोष्टहरू।